अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत खतिवडाले आजदेखि कार्यभार सम्हाल्नुभयो
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले आज सोमबारबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । पूर्वराजदूत डा. अर्जून कार्की शुक्रबार नेपाल फर्किए लगत्तै शनिबार अमेरिका पुग्नु भएका राजदूत खतिवडाले सोमबारदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने जनाइएको छ ।
जानकारी अनुसार ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाएपछि मात्र उहाँले अन्य भेटघाट थाल्नुहुने भएको छ । अमेरिका पुग्ने वित्तिकै विमानस्थलमा महावाणिज्यदूत प्रेमराजा महत र दूतावासका कर्मचारीहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
आजबाट कार्यभार सम्हाले पनि राजदूत खतिवडाले एकसाता क्वारेन्टाईनमा बस्ने महावाणिज्यदूत महतले जानकारी दिनुभयो । खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका अति विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ । उहाँले पूर्व अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगकको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ ।